Weeraro Askar lagu dilay oo ka dhacay Baraawe iyo duleedka Baydhabo.
Saturday January 04, 2020 - 19:59:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro khasaara dhaliyay oo saacidihii lasoo dhaafay ka dhacay gobollada Baay iyo Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in weerar gaadma ah oo saaka aroortii ay ciidamada Al Shabaab ka fuliyeen wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba ku dileen maleeshiyaad katirsan maamulka Koonfur Galbeed.
Wariye ku sugan gobolka Baay ayaa sheegay in ugu yaraan 2 askari lagu dilay halka loo yaqaan Korn Roge oo u dhow magaalada Baydhabo.
Maleeshiyaadka labeegsaday ayaa isbaaro dhigtay wadada laamiga ah halkaas oo ay gaadiidka dadweynaha uga qaadayeen lacago baad ah, ciidamada Al Shabaab ee weerarka qaaday ayaa gacanta ku dhigay laba qori AK47 ah oo ay wateen maleeshiyaadkii ladilay.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada Baraawe ayaa sheegaya in qarax lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, hal askari ayaa la xaqiijiyay in uu qaraxa ku dhintay iyadoona mid kale uu ku dhaawacmay.